Ka ọ dị ugbu a, "mmetọ ọcha" abụrụla okwu ọha mmadụ nke metụtara mba niile n'ụwa. Enwere ike ihu otu ihe ma ọ bụ abụọ site na nrụgide na-arịwanye elu nke obodo m na nchedo gburugburu ebe obibi. N'okpuru oké lanarị ihe ịma aka nke mmetọ ikuku, t ...
Iko karama bụ arịa maka ọgwụ, nri, na ngwaahịa nlekọta ahụike. N'ime ha, a na-eji ezigbo akụrụngwa soda lime karama mee ka ọ dị ọcha na ogbako ọcha nke 100,000. Soda-lime karama iko dị mfe ime, na-enweghị mgbanwe ma na-agbanwe agbanwe ...
Kedu ihe bụ njirimara maka ịmata karama mmanya iko ruru eru? Onye na-emeputa karama mmanya na Easypack ga-agwa gị gbasara isi ihe na-emetụta ogo karama mmanya: ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ogo dị n'ime karama mmanya iko, nke cours ...
Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Clear Glass mgbapụta karama, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Iko karama na ịgba nfuli,